Wilberforce တက္ကသိုလ်အဆင့်လက်ခံရေး: ACT ရမှတ် & ပို
ကျောင်းသားများ & မိဘများအဘို့ ကောလိပ် Profiles
by Allen က Grove
ACT ရမှတ်, လက်ခံနှုန်း, ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီ & ပို
Wilberforce တက္ကသိုလ် 55% ၏လက်ခံမှုနှုန်းမှာရှိပါတယ်သော်လည်းဝင်ခွင့်များဘားမမြင့်မားသည်နှင့်ပျှမ်းမျှအဆင့်နှင့်စံချိန်စံညွှန်းမီစမ်းသပ်ရမှတ်များနှင့်အတူပါဆုံးကျောင်းသားများကိုဝန်ခံခံရနည်းနည်းဒုက္ခရှိသင့်ပါတယ်။ Wilberforce ဖို့လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်အဘယ်အရာကိုထွက်ရှာရန်, ကျောင်းရဲ့ website ကထွက်စစ်ဆေး, ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များများအတွက်ဝင်ခွင့်များရုံးကိုဆက်သွယ်ရန်သေချာစေပါ။
Wilberforce တက္ကသိုလ်လက်ခံနှုန်း: 55%
test ရမှတ် - 25/75 percentile
ဝေဖန်စာဖတ်ခြင်း Sat: 303/380
SAT သင်္ချာ: 310/400
SAT ရေးသားခြင်း: 320/398
အဘယ်အရာကိုဤအ SAT နံပါတ်များကိုဆိုလို
Composite Act: 14/18
ACT အင်္ဂလိပ်: 11/17
ACT သင်္ချာ: 14/17
အဘယ်အရာကိုဤအ ACT နံပါတ်များကိုဆိုလို
Wilberforce, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်မှာတည်ရှိပါတယ် Wilberforce တက္ကသိုလ်, တက္ကသိုလ်နေတဲ့သမိုင်းကြောင်းအအနက်ရောင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပြီး, မက်သဒစ်ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းတော်ဘုရားကျောင်းနှင့်အာဖရိကမက်သဒစ်ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းတော်ဘုရားကျောင်းကတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ် 1856. ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Wilberforce (အကြောင်းကို 1500 နေထိုင်သူများနှင့်အတူ) သေးငယ်တဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး 20 ခန့်မိုင်အရှေ့ Dayton ၏တည်ရှိသည်။ ကျောင်းသားများအဖြစ်ကောင်းစွာအနီးအနားရှိမွို့၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတစ်ကျေးလက် setting ကို၏အငြိမ်ဝပ်စွာနှစ်ဦးစလုံးခံစားနိုင်။ Academic, ကျောင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း-orientated ဗိုလ်ကြီးနှင့်ဒီဂရီအပေါ်အလေးပေး - လူကြိုက်များတဲ့ရွေးချယ်မှုစီးပွားရေး, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အုပ်ချုပ်မှုလယ်ကွင်းများပါဝင်သည်။ စာသင်ခန်းပြင်ပ, ကျောင်းသားများသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများလှုပ်ရှားမှုများအများအပြားအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Wilberforce ပညာရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း-based ကလပ်တစ်ခုတက်ကြွဂရိအသက်, ဘာသာရေးန်ဆောင်မှုများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများပေးထားပါတယ်။ အားကစားမျက်နှာစာတွင် Wilberforce ခွေးဘီလူးများဟာလွတ်လပ်တဲ့အဖြစ် Intercollegiate ပြေးခုံပစ် (NAIA) ၏အမျိုးသားအစည်းအရုံးအတွက်ယှဉ်ပြိုင်။ လူကြိုက်များတဲ့အားကစားဘတ်စကက်ဘော, ဘော်လီဘော, softball နှင့်တင်းနစ်ပါဝင်သည်။
စုစုပေါင်းကျောင်းအပ်: 646 (620 တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ)
ကျား, မပြိုကွဲရ: 38% အမျိုးသား / 62% အမျိုးသမီး
ကုန်ကျစရိတ် (2015 - 16):
ကျူရှင်များနှင့်အခကြေးငွေများ: $ 13.475
စာအုပ်များ: $ 1200 ( အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်? )
အခန်းတစ်ခန်းနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့: $ 6.456
သည်အခြားကုန်ကျစရိတ်: $ 4000
စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်: $ 25.131
Wilberforce တက္ကသိုလ်ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီ (2014 - 15):
Aid ကိုလက်ခံခြင်းနယူးကျောင်းသားများရာခိုင်နှုန်း: 94%
ထောက်ပံ့ငွေ: $ 11.109
ချေးငွေများ: $ 8.069
လူကြိုက်အများဆုံးအဓိက: အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်မှု, ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီမံခန့်ခွဲရေး, စိတ်ပညာ, ဇီဝဗေဒ, လူမှုရေးလုပ်ငန်း, စျေးကွက်
လွှဲပြောင်း, ကျောင်းဆင်းပွဲနှင့် retention Rating:
ပထမဦးစွာတစ်နှစ်တာကျောင်းသား retention (အချိန်ပြည့်ကျောင်းသားများကို): 72%
သင်ဟာ Wilberforce တက္ကသိုလ်လိုပဲလြှငျ, သငျသညျဒါ့အပြင်အဲဒီကျောင်းများလိုနိုင်ပါစေ:
Howard တက္ကသိုလ်မှ: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
Spelman ကောလိပ်: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
Bethune-Cookman တက္ကသိုလ်: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
Fisk တက္ကသိုလ်: ကိုယ်ရေးဖိုင်
Bowling Green ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၏မိုင်ယာမီတက္ကသိုလ်: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
Kent State University တွင်: ကိုယ်ရေးဖိုင် | GPA-SAT-ACT ဇယား
Hampton တက္ကသိုလ်: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
Alabama အဘိဓါန်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ: ကိုယ်ရေးဖိုင် | GPA-SAT-ACT ဇယား
Clark ကအတ္တလန်တာတက္ကသိုလ်: ကိုယ်ရေးဖိုင် | GPA-SAT-ACT ဇယား
Toledo တက္ကသိုလ်: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
Wright ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
Wilberforce တက္ကသိုလ်ကိုအသုံးပြုသည် တူညီသည့်အလျှောက်လွှာ ။ ဒီဆောင်းပါးတွေကိုသင်ကူညီလမ်းညွှန်နိုင်သည်
Wisconsin ပြည်နယ်-Eau Claire အဆင့်လက်ခံရေးတက္ကသိုလ်
ဂရန်း Canyon အတက္ကသိုလ်အဆင့်လက်ခံရေး
Louisiana အဆင့်လက်ခံရေး၏ Centenary ကောလိပ်
လူအားလုံးတို့သည်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Blitz အကြောင်း
တစ်ဦးရိုမန်းတစ် Mood5စန္ဒယားသီချင်းများ
ဘယ်လိုကောငျးကငျတ Raphael Tobit ၏ကျမ်းစာရဲ့စာအုပ်အတွက်ပြည်သူ့အနာကိုငြိမ်းစေပါသလား?
အားလုံးအချိန်ထိပ်တန်း 10 အိုလံပစ်ဂျူဒိုတိုက်လေယာဉ်
အဆိုပါ Coleman လျှော: ညွှန်ကြားချက်များရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းနှင့်ပွတ်ဆွဲကူးပြောင်းမှု
Hypothesis အဓိပ္ပာယ် (သိပ္ပံ)
ဘယ်လိုသင့်ရဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita ပြင်ဆင်ပါရန်
"ဟုအဆိုပါနာရီခန့်" မြှား Play လုပ်နည်း
အမေရိကန်သမိုင်း Timeline ကို 1871-1875
အနုပညာ Styles, ကျောင်းများနှင့်လှုပျရှားမှုအကြားခြားနားချက်
သူတို့ကပြည်သူ့နေစဉ်းစားပါကဘယ်သူလဲ 20 Funny တိရစ္ဆာန်များ
ဂေါက်ကွင်းအတွင်း Shot အဆိုပါဖြတ်: အဘယျသို့ဒါဟာ Is နှင့်မည်သို့တစ်ခုမှာ Hit မှ
သင့်ရဲ့ဦးဆောင်ဂစ်တာ Play တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန်6နည်းလမ်းများ
T4A ကနေဒါဝင်ငွေခွန်အခွန်အဘို့ (OAS) ကိုအခွန်ချော်
ရောဘတ် Rauschenberg ရဲ့ပေါင်းစပ်
အကြွင်းမဲ့အာဏာ Beginner အင်္ဂလိပ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များ